Amazambane - ngempela yemifino kwendle ozwelayo yesondlo okungafanele kwezimiso isitoreji ebusika. Umsuka kwezitshalo akawuthandi abandayo, shisisa ngaphansi okusezingeni eliphezulu nomswakama bola. Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukugcina amazambane emiphongolweni kanye indlela ukuhlomisa isikhala esidingekayo elindela isivuno, kungatholakala esihlokweni esilandelayo.
Ngemva lokuqoqa noma ukuthenga impande kwezitshalo kudingeka anakekele endaweni isitoreji. Kufanele kube esomile, amnyama futhi ekamelweni elipholile, engesiyo amenable ukuba umnkantsha. Inketho kakhulu sendlela ukugcina amazambane - lena emiphongolweni noma egumbini elingaphansi, lapho izinga lokushisa uhlala cishe enjalo. Amazinga isilinganiso in isitoreji ebusika kufanele kube kusuka degrees 2 kuya ku 4, nomswakama kumele singeqi 70%. Ukuze wehlise dampness phansi ukhaphethi emiphongolweni imfucumfucu noma amatshe. Uma izinga lokushisa Igumbi kuyinto amazambane aphansi ukuqala isikhunta futhi ukhunta, bese uzithande amnandi. Uma kukhona iwindi endaweni sela, kufanele uqiniseke ukuqondisa kwelanga shining ungene isivuno. Uma kungenzeka, egumbini kufanele senza ngezikhathi ezithile emoyeni amile yokuntuleka ukupholisa kungukuthi yokulinyazwa amazambane. isitoreji ngempumelelo amazambane ngezindlela eziningi incike ukulungiselela ngokucophelela isivuno. Ngaphambi ukubeka amazambane, kumele ibekwe endaweni evulekile, futhi ngemva kwamahora ambalwa, kahle omisiwe ukugwema abolile kanye isikhunta. Kuhle kokusho ukuthi yini yonke inhlobo impande kahle futhi igcinwe okwesikhathi eside. Kakhulu kahle walondoloza maphakathi no-inkathi (ngabe yikuphi hhayi overripe) nezinhlobonhlobo ophuzi. I amazambane eqoqwe kwekwindla, egcwele umswakama, ngokushesha kungaholela ukuwohloka futhi bola. Ngaphambi nokupakisha wenza ezikhethwe ngokucophelela amazambane: kumelwe babe abaphile khulula amaphutha kanye zamehlo, mayelana usayizi ofanayo isilinganiso. Ungashiyi izithelo esitolo esitezi elingenalutho. Kunezindlela eziningana ukugcina amazambane: amanetha, emasakeni kanye namabhokisi.
Ukugcina amazambane emanetheni
Lapho isivuno siba Igumbi usulungile, kangakanani ukuxazulula inkinga: kanjani ukugcina amazambane emiphongolweni ku-grid? Le ndlela ulula futhi ngempumelelo. Ngaphambi kokushiya isivuno kusitoreji, it is warehoused kulezi zimo zangaphambi esakhiwe noma emathileyi ngaphandle kokukhipha ke kusukela kugridi-isikhwama.
Igridi ikhuthaza ukufinyelela khulula nokusakaza emoyeni phakathi tuber ukuthi inomphumela ezuzisayo phezu amazambane, ekuvimbeleni izifo ezihlukahlukene ukuvela. Wabeka phezu impande utshani isitaki, esaziwa ukushisa nokuvikela nezilimo eziyizigaxa kusuka frost. Futhi phezu kwezitshalo kungenziwa sibekwa izingqimba eziningana beet. Le ndlela wesitoreji ubhekwa yesikhathi esifushane neyezinto kufanelekile amazambane senzelwe ukusetshenziswa nsuku zonke.
Ukukhuluma ngendlela ukugcina amazambane emiphongolweni emasakeni, kumelwe kushiwo ukuthi ngempela elula futhi indlela ezivame kakhulu. Ukuxoshwa siya sifudumala futhi ivikela imifino ezibandayo ngokumelene. liphinde sisetshenziselwa izinto zemvelo, ezinhle ukudlula umoya. Namuhla, kunamabandla densified iphepha izikhwama, kodwa abaqiniseki esiwuhogelayo. Ukuze ugweme ukulimala izingqimba engezansi amazambane ngaphansi izikhwama futhi udinga ukufaka Pallet noma ezinye flooring evikela isithelo frost ukubola. La masaka egcwele lamapulangwe Pallets noma umbuthano 5 ngamunye ngokulala isikhundla ukuphakama futhi kumamitha angu-3. Ngemva kwalokho imifino kungenziwa embozwe zokulala ezindala, sawdust noma hay. Uma isikhathi wesitoreji libanzi, udinga ukulondoloza isikhala kancane phakathi izikhwama, ngaleyo ndlela kokushiya isikhala air eyanele. Kuyinto elula kakhulu ukugcina isivuno emasakeni uma kukhona isidingo ukulayisha yayo njalo noma athula. Okunqatshelwe isitoreji amazambane emasakeni epulasitiki bese amasaka, lapho umoya kancane. Izithelo esitsheni Bamanzi bese iqala ukubola.
amazambane Ukugcina ngobuningi
Ukugcina amazambane ngobuningi kuhlanganisa ongakhetha eziningana: ngobuningi futhi indlela zakromny. indlela Bulk uma kuziwa indlela ukugcina amazambane emiphongolweni - emasakeni noma ngobuningi, - esetshenziswa njengoba isikhathi ukulethwa yokuqala amazambane eYurophu. Kuthathwa inketho elula kakhulu, kulula futhi zamanani aphansi ukuthi Akudingi amakhono akhethekile umzamo. Badinga kuphela uthele amazambane 1-1.5 m, nesifulelo, ushiye kuze okwamanje ukusetshenziswa noma ukutshala izitshalo. I yokuntula le ndlela ihlanganisa yinkimbinkimbi ukulawula izinga lokushisa ngaphakathi inqwaba amazambane ifinyelela ukuphakama 1.5 m, futhi indawo enkulu ehlasela lapho amazambane. Zonke lezi zici ngeke avuse ukubukeka bola nesikhunta, ngenxa okuyinto kuyodingeka ukuba uhlanganise isivuno isikhala esisha umoya. Zakromny isitoreji indlela isetshenziswa ngokuyinhloko ukuze kuqinisekiswe ukuphepha izithelo, kuhlehliswa nembewu kunyaka ozayo. Potato imbewu ungqimba akufanele futhi iyophakama kuno-80 cm noma 1 m ukuhambisa imbewu angase emoyeni ngokuzikhethela ihlolwe ukuphepha, khona isikhunta Amagciwane. Njenganoma indlela ngobuningi, zikhona nemiphumela ethile engathandeki: isitshalo isikhala kakhulu, kunzima ukuzumeka, uthole, futhi akwaziwa lapho izoqala ihluma. Kule ndaba futhi kuyadingeka ukwenza wokuhlola ngezikhathi futhi yokukala izinga lokushisa ngaphakathi isivuno.
Indlela ukugcina isivuno kumagumbi unheated?
Ukuze siphendule lo mbuzo ukuba benzeni futhi kanjani ukugcina amazambane emiphongolweni, igalaji unheated, ukusiza Quilts ubudala. Bag, inetha noma ibhokisi amazambane kumele zihambisana izingqimba eziningana zezingubo zokulala ezindala, bedspreads nezinto ezingafaneleki emnothweni. Kubalulekile ukuthi kwakukhona izimbobo ezincane uvumele umoya sidlule. imifino Abaningi zigcinwa emagalaji unheated futhi zewayini, kusetjenziswa imihlobohlobo ikesi lokhuni kanye namabhokisi. Buhle okukugcina wukuthi kufanale agqoke izikhindi zangaphansi kungenziwa oluhlukaniswe izigaba ngoba ekulinganisweni amazambane ezihlukahlukene, ubungako kanye injongo. Ngaphezu kwalokho, ukuze amabhokisi kunguJesu esikwazi elula, abazi luthathe isikhala kakhulu futhi umoya kahle. Amazambane emabhokisini kulula ezokuthutha kanye ukufakwa. Kukhona futhi ahlukahlukene zikagesi futhi amalambu, ngawo ungagcina nemifino efudumele, ngenkathi kugwenywa izindleko ezinkulu zezimali.
Ukuze uqonde ukuthi ukugcina amazambane emiphongolweni - ibhizinisi elula. Into eyinhloko ukuthi ngezikhathi ezithile uhlole izinga lokushisa kanye nomswakama endlini, kanye nesikhathi afeze control inkathazo, isikhunta futhi isikhutha. ukustaka Proper, isitoreji nokulandela zonke izinyathelo - ukongiwa amazambane yisibambiso lonke, enhle futhi iphephile!
Purslane: kanjani ukuba uthole ukhula
Indlela yokutshala yesihlanu?
Umsebenzi futhi ukuphila komuntu actress uKelli Razerford
Yini Isivumelwano kufanele isayinwe lapho ithola ukubolekisa auto